Costa Rica: Fiantraikan’ny Aterineto Amin’ireo Fifidianana Filoham-pirenena ny Taona 2006 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 12:16 GMT
Ny dika voalohany amin'ity lahatsoratra ity dia afaka jerena ato amin'ny teny espaniola.
Nanana singa manokana mihitsy ireo fifidianana filoham-pirenena ireo satria ireo no fifidianana voalohany tena nandraisan'ny aterineto anjara lehibe tokoa. Tsy hoe ho an'ireo tranonkalan'ireo antoko politika maro sy ireo kandidà (ML, PLN, UPC, PAC, PUSC) fotsiny, fa ihany koa satria ireo fifidianana ireo dia namela fifanakaloza samihafa sy mahafa-po, hevitra, ideolojia, ary fomba fijery mikasika ny kandidà itsy na iroa. Ny tena zava-dehibe dia maro amin'ireo adihevitra ireo no natao tao amin'ny vondrom-piarahamonia mivoatran'ireo bilaogy Kôsta Rikàna, ahitàna ireo vohikala tahaka ny jdclarke izay nampiditra lahatsarin'ireo adihevitra mihitsy. Na ireo bilaogy tahaka ny fusildechispas izay naneho hevitra tamin'ilay adihevitra farany momba ny fifidianana filoham-pirenena aza, izay naharitra maherin'ny ora dimy ary nahatazona ny fahalianantsika arakaraky ny nandehanan'ireo minitra.
Tao amin'ireo bilaogy hafa tahaka ny La Suiza Centroamericana, matetika i Dean Cornito no mametraka ny tsy fahazoany aina amin'ny sokajy ara-politika eto amin'ity firenena ity. Bandidocr, iray amin'ireo vitsy be herim-po nahavita nijery hatramin'ny farany, manome famakafakana kely ny fahombiazan'ny kandidà tsirairay. Se salvó el pais indray miresaka fotsiny mikasika ny kalitaon'ny fanambaràna ampahibemaso na fampielezankevitra tahaka ny fanehoankevitry ny sasany amintsika teo aloha momba ny (tsy fahampian'ny) fahaizamanaon'izy ireo satria ny ankamaroan'izy ireo nitontongana ho fampihomehezana ary lasa fandaniam-potoana.
Ho famintinana, mandray anjara lehibe ny ampahany lehibe amin'ireo bilaogy Kôsta Rikàna tamin'ny famolavolana ny hevitry ny vahoaka sy amin'ny fanentanana fifanakalozankevitra tsara momba ny fifidianana filoham-pirenena arakaraky ny hanakaikezan'izy ireny. Tsy mbola nisy mihitsy teo aloha ireo kandidà no notsinkafonina antsipirihany tahaka ny mahazo azy ireo ankehitriny.